Lo mcimbi ubuhanjelwe abafundi bezikole zamabanga aphezulu eziseThekwini lonkana, bewuyithuba lokuthi bathuthukise amakhono abo ezamabhizinisi ngokuxhumana nabantu abanamakhono neqhaza abalibambile kwezeSayensi nobuChwepheshe nezokuQamba.
Umphathi we-GSB&L’s RLEDI uDkt Jennifer Houghton, uthe inhloso yombukiso bekuwukuhlomisa intsha ngolwazi lokuguqula imicabango yabo ibe yinto eyenzekayo.
‘Sidinga ukuthi intsha icabange ngekusasa layo futhi ibheke ukuthi ingayiguqula kanjani le micabango ukuthi ibe yindlela yokuzithuthukisa. Intsha ibalulekile kwikusasa lezwe futhi siyabonga nokuthi bazokhombisa ngamathalente abo’ usho kanje.
Umcimbi ubunabakhangisi ababambe iqhaza elikhulu emikhakheni efana nezomculo, ezokukhiqiza nezamabhizinisi amancane ngenxa yokuthi bekubhekwe isasasa lentsha ngesimo sesifundazwe ngasohlangothini lwezominotho esathuthuka. Ukuze abafundi baqale ukucabanga ngemikhakha abafuna ukusebenza kuyo, abafundi bahlukaniswe ngamaqembu abaqambayo, abasungulayo, abenzayo, abanobuciko, nabangosomabhizinisi futhi banikwa nethuba lokukhangisa ngamakhono abo emmncintiswaneni wamathalente.
Onqobe lomncintiswano kube umfundi wase-Ogwini Comprehensive High School uNkz Noluthando Mkhwanazi ngeculo lakhe aziqambele lona elimnandi elihehe izithameli.
‘Ngijabule kakhulu ngokuthola ithuba lokukhombisa izwe ngethalente lami futhi nabantu bathokoze kakhulu. Njengoba sengixoxisene nabantu abasemkhakheni wezomculo, nginesiqiniseko sokuthi ikusasa lami kwezomsebenzi lisemkhakheni wezomculo,’ usho kanje.